Valverde oo si RASMI ah u magacaabay liiska Barcelona kulanka caawa ee kooxda Manchester United – Gool FM
(Yurub) 16 Abriil 2019.Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xidigaha Blaugrana ee kaga qeyb galaya kulanka adag ay caawa la ciyaari doonaan Manchester United.
Kooxda reer Catalonia ayaa caawa ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Cump Nou dhigeeda Manchester United, si ay u wada ciyaaraan kulanka lugta 2-aad wareega siddeed dhamaadka ee tartanka UEFA Champions League.
Kulanka lugta hore ee ka dhacay garoonka Old Trafford ayaa ku soo idlaaday 1-0 ay guusha ku raacday kooxda Barcelona.
Hadaba liiskan uu ku dhawaaqay tababaraha reer Spain ee Ernesto Valverde ayaa waxaa ku soo baxay xidigaha Rakitic iyo Sergi Roberto, maadaama ay ka maqnaayeen kulankii lasoo dhaafay Huesca ee horyaalka La Liga.
Hadaba liiskan uu ku dhawaaqay tababare Ernesto Valverde ee ka qeyb galaya kulanka caawa ee kooxda Manchester United ayaa kala ah:
HORDHAC : Juventus VS Ajax? Tollow Juventus mala kulmi doontaa lama filaankii ku dhacay Kooxda Real Madrid